TurnTo: Syndicate Reviews with your Product's Distributor | Martech Zone
Fraịdee, June 9, 2017 Fraịdee, June 9, 2017 Douglas Karr
Syndication bụ ụzọ dị oke mma maka ndị na-ere ahịa n'ịntanetị iji bulie olu ngwa ahịa na nyocha ha (nyocha) ha gosipụtara. Dị, nke mbụ na-anakọta onye ọrụ a bara uru mepụtara ọdịnaya (UGC), na-anụ ọkụ n'obi maka ndị na-ere ahịa ka ha gosipụta ihe ndị a na saịtị eCommerce ha. Site na ikerita ihe nlere ha na ndi ha na ha n’enye ekesara ha, udiri ahia nwere ike inyere aka mee ka ngwa ahia ha puta ma rekwaa nke oma, ka egosiwo na mpi nyocha di elu ka iwolite ahia.
Ruo ugbu a, ụdị nkwekọrịta ahụ ga-ekwe omume naanị site na emechi netwọk. Nsogbu bụ, usoro a chọrọ ma ụdị ndị na-enye nyocha na ndị na-ere ahịa na-anabata ha iji otu ikpo okwu ma nwee nkwekọrịta nkwekọrịta maka ịgbanwere ọdịnaya. A na-egbochi ndị na-eji nyiwe ndị ọzọ na mgbanwe ahụ, a na-ebokwa ụdị ndị a na-akwụ ụgwọ ụgwọ dị ukwuu site n'aka ndị na-eweta nyiwe ha maka ịnweta ntanetị.
Usoro Ntugharị Ntugharị TurnTo
Netwọk TurnTo bụ onye na-eweta usoro ọdịnaya ndị ahịa na-esote maka ndị ahịa na ụdị dị elu. Na otu ụlọ pụrụ iche nke ngwaahịa anọ ọhụụ:
Onyinye & Nyocha
Ntinye ego ndenye ego
TurnTo na-ewepụta ọdịnaya na obere ọrụ, na-achọpụta oke izi ezi, mbugharị ntụgharị, njikarịcha njin ọchụchọ (SEO) na nghọta ahịa. Iji nyere ndị ahịa aka imeri nsogbu ụlọ ọrụ na-adịte aka, TurnTo webatara netwọkụ ghere oghe na nso nso a. Mepee Syndication Review na-abawanye ịkekọrịta ọdịnaya, na-eme ka ọnụ ọgụgụ nyocha ka ukwuu, na igbutu oke "ụgwọ nnweta" nke netwọkụ mechiri emechi na mbụ.
na Mepee Syndication Review, ụdị ọ bụla nwere ike ịnye nyocha na ndị na-ere ahịa ugbu a site na TurnTo's Content Content Suite, n'agbanyeghị nchịkọta nchịkọta na njikwa ha na-eji. Enweghị njikọta ọrụ aka dị mkpa, na ụdị nwere ike ịnwe nyocha agbakwunyere na netwọk TurnTo ma gosipụta na saịtị eCommerce ibe gị n'ime otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ.
Ndị na-ere ahịa na-ele ma jikwaa ọdịnaya ahụ sitere na ntụgharị TurnTo maka njikwa ịkpa oke na njụta ​​akụkọ. TurnTo na-enyekwa API nweta ndị ahịa na-eji nyiwe ndị ọzọ eme ihe - nke a na-enweta usoro ụlọ arụpụtara - nwere ike irite uru na nchịkọta nyocha ngwaahịa maka oge izizi, yana.
Netwọk njikọ mechiri emechi enweghị isi. Ọ dị ka ụlọ ahịa na-ewe mmadụ ụgwọ iji guzobe ngosipụta nke njedebe ha, naanị onye ahụ na-ere ụlọ nchekwa ahụ adịchaghị elu na ụlọ ọrụ soda na akpa ego. A na-ewu TurnTo's Open Review Syndication gburugburu usoro dị iche iche. Ọdịnaya ahụ bụ nke ụdị ndị ahụ - ha kwesiri ịkekọrịta ya iji nyere ndị na-ere ahịa ha aka. Netwọk ahụ bụ nke ndị na - ere ahịa - ha kwesịrị inwe ike igosipụta nyocha site na ụdị ọ bụla chọrọ ịkekọrịta. Ọrụ anyị bụ ime ka ọ dị mfe ha abụọ ịrụ ọrụ ọnụ. George Eberstadt, onye isi oche nke TurnTo
Azụmaahịa CPO, nke na-ere ngwa ọrụ ike sitere na ụdị niile bụ isi, tụgharịrị na TurnTo's Open Review Syndication ma nweta uru dị ike. Na mbụ, ndị na-ere ahịa ahụ jiri netwọkụ mechiri emechi, yana n'ihi na ọtụtụ ụdị na ndị na-emepụta ngwaahịa ndị CPO na-ere ngwaahịa adịghị na ntanetị na ntanetị, ha tufuru syndication nke nyocha, ndị na-ere ahịa na-akụda mmụọ bụ ndị chọrọ isonye mana ha enweghị ike. .
Site na teknụzụ TurnTo, CPO ji okpukpu abụọ karịa ọnụ ọgụgụ ụdị nke ha si nweta ọdịnaya ọdịnaya ma na-abawanye ọnụ ọgụgụ nyocha nke egosiputara karịa 250 percent.
Mụtakwuo Banyere TurnTo Open Review Syndication
Tags: AHOSECPOAzụmaahịa CPOemeghe review syndicationnnyocha ngwaahịaNyochasyndicated nyochaTụgharịa